AHOANA NY FAMERENANA NY BIOS AMIN'NY SOLOSAINA AMIN'NY ORDINATERA? FIDIO NY TENIMIAFINA. - BIOS - 2019
Ahoana ny famerenana ny BIOS amin'ny solosaina amin'ny ordinatera? Fidio ny tenimiafina.
Maro ireo olana ao amin'ny solosaina findainao raha toa ka averinao ny safidin'ny BIOS amin'ny sehatry ny orinasa (indraindray antsoina hoe tsara na azo antoka).
Amin'ny ankapobeny, dia vita mora izany, ho sarotra kokoa raha mametraka ny tenimiafina ao amin'ny BIOS ianao ary rehefa mamadika ny solosaina findainao dia hangataka io tenimiafika io ihany. Eto, tsy ampy ny fanapahana ny solosaina finday ...
Amin'ity lahatsoratra ity dia te-handinika ireo safidy roa ireo aho.
1. Mamerina ny BIOS amin'ny solosaina ho any amin'ny orinasa
Mba hampidirana ny fiasan'ny BIOS dia ampiasaina matetika ny fanalahidy. F2 na Famafana (indraindray ny fanalahidy F10). Miankina amin'ny modelin'ny solosaina findainao izany.
Mora ny mahafantatra izay bokotra manosika: atsangano ny solosaina (na mametaka azy io) ary jereo ny mijery voalohany (misy foana ny bokotra eo amin'ny fikirakirana BIOS). Azonao atao koa ny mampiasa ny antontan-taratasy izay tonga amin'ny laptop rehefa mividy.
Ary noho izany dia hiaiky izahay fa niditra tao amin'ny sehatra Bios. Aorian'izay isika dia liana Tabilana fivoahana. Amin'ny lafiny, ao amin'ny solosaina misy marika samihafa (ASUS, ACER, HP, SAMSUNG, LENOVO) dia mitovy ny anaran'ny fizarana BIOS, ka tsy misy dikany ny fakana sary ho an'ny modely tsirairay.
Mametraka ny BIOS amin'ny laptop ACER Packard Bell.
Atero any amin'ny fizarana "Exit", tsindrio ny tsipiky ny endrika "Ampidino ny fametrahana Setup"(ie ny famandrihana ny safidin'ny default (na ny famariparitana). Ary ao amin'ny pop up window ianao dia mila manamarina fa te hamerina ny fanovana.
Ary ny miala amin'ny biôs ihany no mamonjy ny fanovana natao: mifidiana Mialà sasatra miova (andalana voalohany, jereo ny pikantsary etsy ambany).
Fandefasana solonanarana setroka - fametrahana ny safidy default. ACER Packard Bell.
Amin'ny lafiny iray, amin'ny 99% amin'ny tranga miaraka amin'ny fametavetana reset, ny solosaina dia hibata ara-dalàna. Indraindray misy hadisoana kely iray ary tsy hita ao amin'ny solosaina ny boot (avy amin'ny hoe fitaovana: flash drive, HDD, sns.).
Hanamboatra izany, miverena any Bios ary mandehana any amin'ny fizarana Kiraro.
Eto ianao dia mila manova ny tabilao Boot mode: Hanova ny UEFI ho Lova, avy eo fivoahan'i Bios amin'ny famolavolana safidy. Rehefa naverina indray - ny solosaina dia tokony handrina araka ny tokony ho izy avy amin'ny rakitra mafy.
Hanova ny fomba fiasan'ny fandefasana.
2. Ahoana ny famerenana ny fijerin'ny BIOS raha mitaky ny tenimiafina?
Ankehitriny, alaivo sary an-tsaina ny toe-draharaha goavana: tonga ny fametrahana ny tenimiafina ao amin'ny Bios, ary amin'izao fotoana izao dia hadinonao izany (na rahavavy, rahalahy, namana mametraka ny tenimiafina ary mangataka fanampiana ...).
Amboary ny solosaina (amin'ny ohatra, ny orinasa Laptop ACER) ary jereo ireto manaraka ireto.
ACER. Mitaky ny tenimiafina hiasa amin'ny solosaina finday ny Bios.
Amin'ny fanandramana rehetra hikolokoloana, ny valin'ny laptop dia mamaly amin'ny fahadisoana ary rehefa avy nandefa ny tenimiafina vitsy dia voadona ...
Amin'ity tranga ity, tsy afaka atao ianao raha tsy manala ny fonon'ny laptop.
Mila manao zavatra telo fotsiny ianao:
esory ny solosaina avy amin'ny fitaovana rehetra ary esory ny kofehy rehetra mifandray aminy (ny sofina, ny tady, ny totozy, sns.);
esory ny batterie;
esory ny fiarovan-tena izay miaro ny RAM sy ny solosaina findaotra tsara (ny endriky ny ordinatera rehetra dia hafa, indraindray mety mila manaisotra tanteraka ny fonony aoriana).
Laptop solosaina eo amin'ny latabatra. Ilaina ny manaisotra: ny batterie, ny fonony avy amin'ny HDD sy RAM.
Aorian'izay, esory ny batterie, ny fiara mafy ary ny RAM. Tokony hivezivezy mitovy amin'ny sary etsy ambany ny laptop.
Laptop tsy misy batterie, fiara mafy sy RAM.
Misy fifandraisana roa eo ambanin'ny baiko fitadidiana (mbola anaran'i JCMOS izy ireo) - mila azy ireo isika. Ataovy izao manaraka izao:
Manidy ireo fifandraisana ireo ianao amin'ny alalan'ny mpanotrona (ary tsy misokatra mandra-pialanao ny solosaina findainao.) Mila anao ny faharetana sy ny fahamendrehana);
mampifandray ny tady ho any amin'ny solosaina;
Avereno ny laptop ary miandry eo amin'ny faharoa. 20-30;
esory ny laptop.
Ankehitriny dia afaka mampifandray ny RAM, ny fiara mafy orina ianao.
Fifandraisana izay tokony hamehezana hamerenana ny fanovana Bios. Matetika ireo kaonty ireo no nanao sonia ny teny CMOS.
Avy eo dia afaka miditra mora amin'ny BIOS amin'ny solosaina ianao amin'ny alalan'ny F2 rehefa mamadika azy (Bios dia naverina tamin'ny famolavolan'ny orinasa).
Naverina ny BIOS amin'ny laptop ACER.
Ilaina ny filazana teny vitsivitsy mikasika ireo "lavo":
Tsy ny finday rehetra dia hanana fifandraisana roa, ny sasany dia telo, ary ny mamerina, tsy maintsy manosika ilay jumper avy amin'ny toerana iray mankany amin'ny iray hafa ary miandry minitra vitsy;
Raha tokony ho ny jumper dia mety ho ny bokotra resetsy: tsindrio fotsiny amin'ny pensilihazo na penina ary miandry segondra vitsy;
Afaka mametaka an'i Bios ihany koa ianao raha manala ny batterie amin'ny rindrin'ny laptop mandritra ny fotoana fohy (ny bateria dia tahaka ny takelaka, kely).
Izany rehetra izany amin'izao fotoana izao. Aza adino ny tenimiafina!